14 HDG Steel Grating clip lock clamp fastener ตัว คลิปล็อค ยึดจับแผงตะแกรงมีฐานตีนเป็ด ชนิดแสตนเลส/เหล็กชุบซิงค์ *** - My blog
Anchoring Devices attach Saddle Fixing Clip Clamp Lock Fastenal Fastener Bar Steel Grating อุปกรณ์ ตัว คลิปล็อค ยึดจับแผ่นตะแกรงเหล็ก ประกับฮุคที่จับล็อคชนิดแสตนเลส/เหล็กทนสนิม#SaddleClipClampGrating #FastenalFastenerLockBarSteelGrating #อุปกรณ์ตัวคลิปล็อคยึดจับแผ่นตะแกรง #ประกับ ตัวล็อค ตัวต่อ ตัวยึด ตัวแขวน ตัวรับ ตัวเกี่ยว เหล็กยืดแผงตะแกรง
ใบเสนอราคา ตัวคลิปล็อคยึดจับแผงตะแกรงเหล็ก/ไฟเบอร์กล๊าส | Anchoring Devices attach Saddle Fixing Clip Lock Clamp Lock Fastenal Fastener <-– Click ! ดาวน์โหลดโบรชัวร์
กPremium Manhole Grating Specialist | เกรตติ้งตะแกรงเหล็กไฟเบอร์กล๊าสพลาสติกระบายน้ำล้นรอบขอบสระว่ายน้ำสำเร็จรูป FRP-FIBERGLASS STEEL Plastic GRATING | ฝาปิดบ่อพักเหล็กหล่อครอบท่อระบายน้ำทิ้ง แผ่นปูพื้นทางเดินยกระดับ Ductile-Cast-Iron MANHOLE COVER | Swimming Overflow Drainage Gully Gutter Grating | ตัวอุปกรณ์คลิปล็อคยึดแผ่นตะแกรง Anchoring Devices attached Saddle Fixing Clip Clamp Lock Fastenal Fastener Bar Steel Grating | ตะแกรงดักขยะใบไม้ในคันหินด้านข้างริมฟุตบาท Curbed Drainage Grating Scupper | Egg Crate แผงระแนงบังตาหน้ากากตึกตะแกรงกั้นช่องแสงบังไฟตกแต่งตู้ปลา | แผ่นปิดจมูกขอบมุมคิ้วแผงครอบบันได แผ่นปูพื้นปิดผิวกันลื่นไฟเบอร์กล๊าส FRP Stair Tread Nosing Step Cover Protector : FRP Anti-Slip Gritted Plate Sheeting | แผ่นกระดานเพ็กบอร์ดแผงเหล็กเจาะรูติดผนังฮุกตะขอลวดขาแขวน Perforated Pegboard Hook Shelves Racking Storage Tools DIY Kit | www.chancon.co.th | http://GratingThai.com | http://GratingThai.co.th | http://ตะแกรงไฟเบอร์กลาส-ฝาบ่อเหล็กฝาท่อ.com | Line@: @iCHANCON / Line(iD): iCHANCON | Mobile (Sales): 081 932 7894, 061 647 0184-6 Tel: 02 451 0780-1
Chancon ຜະລິດ ອຸປະກອນການຕິດຕັ້ງເຊື່ອມຕໍ່ກັບ Saddle Fixing Clip Lock Lock Clamp Lock Fastenal Fastenal Bar Steel Grating in Steel Mold, Hot Dip Finished, Steel Stainless Steel (316 Grade) – ເຫມາະສໍາຫລັບການກໍາຫນົດຄ່າ Panels ເຄື່ອງປະດັບຂີ້ເຫຍື້ອແມ່ນເຄື່ອງຍຶດທີ່ງ່າຍດາຍທີ່ອະນຸຍາດໃຫ້ແຖບທະເລທີ່ຕິດກັບໂຄງສ້າງເຫລໍກໂດຍບໍ່ຕ້ອງການການເຈາະຫຼືການເຊື່ອມໂລຫະ. ມີປະໂຫຍດຫຼາຍໃນການໃຊ້ສາຍໄຟຟ້າ. ເຄື່ອງຍຶດຫນີບແມ່ນມີຄວາມປອດໄພກວ່າເກົ່າເພາະວ່າມັນບໍ່ຈໍາເປັນຕ້ອງມີການເຊື່ອມໂລຫະຫຼືເຈາະ. ນີ້ແມ່ນຍັງດີເລີດສໍາລັບສະພາບແວດລ້ອມອຸດສາຫະກໍາທີ່ບໍ່ຕ້ອງການການຂຸດເຈາະແລະການເຊື່ອມໂລຫະ. ນອກຈາກການເຊື່ອມໂລຫະທີ່ຕິດຕັ້ງແບບດັ້ງເດີມ, ສາຍ Clamps ສາມາດຖອດອອກແລະຕັ້ງຄ່າໃຫມ່ເພື່ອໃຫ້ສາມາດເຂົ້າເຖິງພື້ນທີ່ພາຍໃຕ້ຕາຂ່າຍໄຟຟ້າໄດ້.ພວກເຮົາໄດ້ອອກແບບໃຫ້ມີການສະກັດ Grating ທົ່ວໆໄປ, ເຊິ່ງເຫມາະສົມກັບການແກ້ໄຂຄວາມແຕກຕ່າງຕ່າງໆແລະເຫມາະສົມກັບຄວາມຫຼາກຫຼາຍຂອງຂີ້ເຫຍື້ອ.
ພວກເຮົາຍັງສາມາດອອກແບບແລະສະຫນອງຄລິບ customized ສໍາລັບການນໍາໃຊ້ພິເສດຕາມຄວາມຕ້ອງການຂອງທ່ານ. ມັນຖືກແນະນໍາໃຫ້ຢູ່ໃນບ່ອນຕິດຕັ້ງທີ່ກໍາລັງຖືກກໍາຈັດເລື້ອຍໆ. SADDLE Clip Lock ຖືກສ້າງຂື້ນໃນລັກສະນະທີ່ແກ້ໄຂໄດ້ຈາກຂ້າງເທິງ.Bar Grating Saddle Clip Clamp Fastenal Fastener Accessories
ငါတို့သည်လည်းဒီဇိုင်းနှင့်သင့်လိုအပ်ချက်နှုန်းအဖြစ်အထူး application များအတွက်ထောက်ပံ့ရေးစိတ်ကြိုက်ကလစ်များနိုင်ပါတယ်။ ဒါဟာဆန်ခါမကြာခဏဖယ်ရှားနိုင်ဖို့ဘာသာရပ်သည်အဘယ်မှာရှိတပ်ဆင်အတွက်အကြံပြုသည်။ အဆိုပါကုန်းနှီး Clip Lock ကိုပြုပြင်တာတွေအထက်မှဖြစ်နိုင်သောကြောင်းထိုကဲ့သို့သောလမ်းအတွက်ဆောက်လုပ်ထားခြင်းဖြစ်သည်။ဘားကကျေးဇူးတင်ကုန်းနှီး Lock ကို Clamp စွဲစေ Fastener ဆက်စပ်ပစ္စည်း Clip
www.CHANCON.co.th လျ: 02 4510780-1 #Grating ကျွမ်းကျင်သူအထူးကု: 081 9327894 လိုင်း ID: iChancon GFRP Composite သံမဏိ Gully Scupper သည့်ကားလမ်းခြစ်ကင်, Culvert ပြွန်တုတ်ကျင်း သို့ဖြစ်. ရေဆင်းစနစ်ကိုပြုပြင်ခြင်းမြောင်းပြီးပုံသွင်းလွယ်သံ Manhole Grid Catch အင်တုံမျက်နှာဖုံးများပစ်ချအန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေး Expanded Access ကိုကြမ်းပြင်လူသွားစင်္ကြပလက်ဖောင်းပေါ်မှပေါက်ဖွားလာသူသတ္တုခြစ်, အကြီးစားတာဝန်ဆုပ်ကိုင် Struts Channel ကို, ဖောက်ထား Air ကိုစီးဆင်းမှုလူမီနီယံကင်, Yard လွှတ်ဆင်းလမ်း Edging အောကျခံခုံ, ကာဗွန် serrated ဘားသံမဏိ, ဘားခြစ်သစျပွုပွငျကုန်းနှီး Clip Lock ကို Clamp Fastener Anchor ตัวล็อคเหล็กยึดแผงตะแกรง, Formworks Tie လှံတံ တောင်ပံ Nut, ฝาท่อระบายน้ำเหล็กหล่อเหนียว, ฝาท่อไฟเบอร์ผสมเรซิ่น, ฝาเปิดปิดถังแมนโฮลแฮนโฮล, ฝาปิดครอบท่อบ่อพักกรองเกรอะ, ฝาปิดท่อระบายน้ำเสียน้ำดี, แผ่น ูร่องน้ำฝาปิดท่อทรงกลม – สี่เหลี่ยม, ฝาปิดคอนกรีตปูนซีเมนต์เสริมเหล็ก, ฝาปิดงานระบบบำบัดรวบรวมน้ำเสียทิ้งชนิดสั่งตัดได้ทันที; เกรตติ้ง, เกรทติ้ง, ฝาตะแกรงเหล็กแผ่นเชื่อมสำเร็จรูป, กรอบตะแกรงปกป้องรอบโคนต้นไม้, แผ่นปิดจมูกขอบมุมคิ้วแผงครอบบันไดกันลื่นทางเดินแท่งรางตัวยูระบายน้ำทิ้งริมขอบฟุตบาท, วายเมท, วายเมช, ไวร์เมช, พร้อมเฟรม, ช่องระบายน้ำ, ลวดเหล็กฉีกพับฉลุเจาะรู, เหล็กยืดคาร์บอนไฟเบอร์, ลายตีนเป็ดไก่, รางระบายน้ำฝน, ขั้นบันไดกันลื่น, ราวกันตก, มินิตะข่ายกันกลิ่น, บล๊อคปู ถนนภายนอก, ตกแต่งบ่ ปลาคราฟ, ภูมิทัศน์, กระเบื้อง, ปูพื้นเครื่องจักรยกระดับ, DIY ติดตั้งง่ายด้วยตัวเอง, โคมติดลอยตะแกรงฝังฝ้าทีบาร์, แผ่นฝ้าเพดานแบบเกี่ยวแขวน, ฉากฝาผนังเบาม่านโปร่งทึบแสงรั้วแผงพาร์ ทิชั่นกั้นห้องฝ้าตกแต่งเอนกประสงค์กันสาดบังตาระแนงบานพับเฟี๋ยมซุ้มไม้เลื้อยรับลม, ตาข่ายป้องกันคลุมนก, แผ่นกั้นขับไล่นกงูกระรอก, แผงแบ่งกั้นสั่งประกอบดีไลท์, โพลีคาร์บอเน ไวนิล, กั้นออฟฟิศสำนักงานห้องน้ำ, ฝ้าตกแต่งปิดงานระบบแอร์สายไฟ, กั้นห้อง, คุณภาพสูงเกรดเอดีไซด์สวยหรูคู่อาคาร, အခန်းထဲမှာတွေ့ဆုံ, ရုံးသောနေရာများ: လေဝင်လေထွက်ကင်မျက်နှာကျက်ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံ, Splashboard / Weatherboard / Slat လိုက်ကာ / Trellis အရိပ်, အမှတ်တရ Panel များနေကာ, အရောင်အသွေးစုံသောအထွေထွေ Sun က Screen ကို Partition ခွဲဆိုင်းငံ့, Anti-Bird ကိုထိန်းချုပ်ရေးခွငျထော, Mini ကိုအလှဆင်ခြစ်ကုလားကာ, ပန်းပုဇယားကွက်အဖုံးဆဲလ်မျက်နှာကျက်လျှောက်လွှာဖွင့်လှစ် , စူပါမားကတ်, ကျောင်း, စင်္ကြံ, အိမ်သာ, ဆေးရုံ, re-အလှဆင်အကျင့်ကိုကျင့်, ฉากแผ่นฝ้าเพดานผนังม่านรั้วราวแผงกั้นพาร์ทิชั่นหลังคากันสาดระแนงบังตาตะข่ายบานพับเฟี้ยมซุ้มไม้เลื้อยกำแพง, แผงระแนงบังตาหน้ากากตึกตะแกรงกั้น ช่องแสงบังไฟฝายตะแกรงหวีดักแยกเศษขยะลอยใส่ช่องระบายน้ำตรงขอบฟุตบาทด กฝุ่นผงตะกอนขยะเศษอาหารใบไม้กระดาษคันหินกล่องช่องตะแกรงรับน้ำรางยูด้านข้างริมฟุตบาท, สเปคตามมาตรฐานของเทศบาลกรมโยธาธิการและผังเมืองกรมทางหลวงชนบทการเคหะแห่งชาติการทางพิเศษแห่งประเทศไทย, ကတုတ်ကျင်းအင်တုံရွက်ထောင်ချောက်ဆင်လုံခြုံ scupper ရေနုတ်မြောင်းအသွားအလာခြစ် PP PVC PE ကို ABS ရေကူးပလတ်စတစ်ဆန်ခါทดแทนแผงกั้นกระจกหน้ากากร้านตึกอาคาร, แผ่นพลาสติกรองพื้นปูร่องน้ำแทนเหล็กผู้เชี่ยวชาญအဝေးပြေးလမ်းမကြီးများ၏ဘေးထွက်လျှောက်အသွားအလာလမ်းလမ်းမကြီးဆန်ခါဖုန်မျက်နှာပြင်သည့်ကားလမ်းအခြမ်းရေနုတ်မြောင်း scupper, หุ้มผนังภายนอก, แผ่นปูพื้นทางเดินไหล่ทางเท้า, ปูรองรับสินค้าจากสายพานลำเลียง, ยกระดับพื้นบ้านและสวนเขตอนามัยกันไฟฟ้าสนามเวทีแสดงประกวด, บล็อกปลูกหญ้า, แผ่นตกแต่งแผงผนังด้านนอกบังตา, ฝ้าเพดาน ผนังเชิงชายระเบียงหน้าจั่วหน้าบันไดกาแลฉากกั้นห้องบานเพี้ยมและแผ่นลายฉลุสำเร็จรูปหลายขนาดลวดชุบพลาสติกลายหลากหลายให้เลือกสามารถนำไปตัดและตกแต่งเพิ่่มเติมเป็นเฟอร์นิเจอร์ลายฉลุผนังลายฉลุใช้ตกแต่งประกอบสถานที่ต่างๆ สวยงามและเป็นเอกลักษณ์อลูมิเนียมคอมโพสิท, คอมโพสิต, เอฟอาร์พี, ทนสึกกร่อนสนิมความร้อนไฟกรดด่างเคมี, ประหยัดพลังงานไม่บว น้ำปราศจากสารพิษไม่ลามไฟ, ไฟเบอร์กลาสหรือใยแก้วชนิดพิเศษคืออะไร, Fibergrate, Strongwell, Webforge, งานซ่อมแซมพื้น, วัสดุเคลือบพื้นผิว, อีพ็อกซี่, อีพ๊อคซี่, อีพ็อคซี่, พื้นอีพ๊อกซี่, โพ ลียูรีเทน, พีวีซี, กาว, ไบโอ, ဇီဝ, PU ကွန်ကရစ်, အပေါ်ယံပိုင်း, ကျောက်ခက်, PE ปรับปรุงพื้นโรงงานอุตสาหกรรม, ครัวโรงแรม, เคลือบบ่อทนสารเคมี, อะครีลิค, ซ่อมรอยแตกร้าวรั่ว ซึม, โค้ทติ้ง, กันซึมดาดฟ้า, บ่อเก็บสารเคมี, รางน้ำไฟเบอร์กล๊าส, หลังคาเมทัลชีท, วัสดุทดแทน หล็ก, หิน, ไม้เทียมสังเคราะห์, wpc พลาสติค, ชีวภาพ, รีไซเคิล, อุปกรณ์, ฟลอเดรน, รูฟเดรน, พื้นกันสึก, กันกระแทก, รางน้ำล้นรอบขอบสระว่ายน้ำ, แผ่นเรียบ, บานเกล็ด, แผ่นพื้นยางปูรอบแท่นเครื่องจักร, พาเลทถาดรองชั้นวาง, พื้นโรงเรือน, บล็อกตัวหนอนบล็อคปูถนนตกแต่งพื้นสนามหญ้าสำเร็จรูปปรับเปลี่ยนฮวงจุ้ย พื้นอีพ๊อกซี่, โพลียูรีเทน, พีวีซี, กาว, ไบโอ, ဇီဝ, PU ကွန်ကရစ်, အပေါ်ယံပိုင်း, ကျောက်ခက်, PE ปรับปรุงพื้นโรงงานอุตสาหกรรม, ครัวโรงแรม, เคลือบบ่อทนสารเคมี, อะครี ลิค, ซ่อมรอยแตกร้าวรั่วซึม, โค้ทติ้ง, กันซึมดาดฟ้า, บ่อเก็บสารเคมี, รางน้ำไฟเบอร์กล๊าส, หลังคาเมทัลชีท, วัสดุทดแทนเหล็ก, หิน, ไม้เทียมสังเคราะห์, wpc พลาสติค, ชีวภาพ, รีไซเคิล, อุปกรณ์, ฟลอเดรน, รูฟเดรน, พื้นกันสึก, กันกระแทก, รางน้ำล้นรอบขอบส ระว่ายน้ำ, แผ่นเรียบ, บานเกล็ด, แผ่นพื้นยางปูรอบแท่นเครื่องจักร, พาเลทถาดรองชั้นวาง, พื้นโรงเรือน, บล็อกตัวหนอนบล็อคปูถนนตกแต่งพื้นสนามหญ้าสำเร็จรูปปรับเปลี่ยนฮวงจุ้ย พื้นอีพ๊อกซี่, โพลียูรีเทน, พีวีซี, กาว, ไบโอ, ဇီဝ, PU ကွန်ကရစ်, အပေါ်ယံပိုင်း, ကျောက်ခက်, PE ปรับปรุงพื้นโรงงานอุตสาหกรรม, ครัวโรงแรม, เคลือบบ่อทนสารเคมี, อะครี ลิค, ซ่อมรอยแตกร้าวรั่วซึม, โค้ทติ้ง, กันซึมดาดฟ้า, บ่อเก็บสารเคมี, รางน้ำไฟเบอร์กล๊าส, หลังคาเมทัลชีท, วัสดุทดแทนเหล็ก, หิน, ไม้เทียมสังเคราะห์, wpc พลาสติค, ชีวภาพ, รีไซเคิล, อุปกรณ์, ฟลอเดรน, รูฟเดรน, พื้นกันสึก, กันกระแทก, รางน้ำล้นรอบขอบส ระว่ายน้ำ, แผ่นเรียบ, บานเกล็ด, แผ่นพื้นยางปูรอบแท่นเครื่องจักร, พาเลทถาดรองชั้นวาง, พื้นโรงเรือน, บล็อกตัวหนอนบล็อคปูถนนตกแต่งพื้นสนามหญ้าสำเร็จรูปปรับเปลี่ยนฮวงจุ้ยအားပေးမှုဖြစ်စေခဲ့ပြီးဂဟေသံမဏိဘားခြစ်ချေးခုခံအရေးကွီး၏ဘယ်မှာစိုစွတ်သော, ချောအခွအေနတစ်ခုစံပြထုတ်ကုန်ဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါပျော့သံမဏိခြစ်ပူအဆိုပါ galvanizing ရေချိုးအတွက်သွပ်ရည်စိမ်နှစ်ပြီးသောနေကြသည်။ galvanizing နှစ်ပြီးသောပူများအတွက်အသုံးပြုသောသွပ်၏သန့်ရှင်းစင်ကြယ် 99,95% သန့်စင်ရလိမ့်မည်။ အဆိုပါသွပ်ရည်စိမ်အပေါ်ယံပိုင်း-3202 IS နှုန်းကဲ့သို့ဖြစ်လိမ့်မည် /-4759 IS /-2629 IS / IS – 2633 / ASTM -a -123 သို့မဟုတ်နိုင်ငံတကာစံချိန်စံညွှန်းများနှင့်ညီမျှ-6745 IS ။ မျက်နှာပြင်၏အသွင်အပြင်ဆန်ခါလွင်ပြင်သို့မဟုတ် serrated သွပ်ရည်စိမ်စတီးဖြစ်ပါတယ်ကျယ်ပြန့်ပြုလုပ်ဖို့အတွက် walkway, ပလက်ဖောင်း, ဘေးကင်းလုံခြုံရေးအတားအဆီးတွေ, ရေနုတ်မြောင်းအဖုံးများနှင့်လေဝင်လေထွက်ခြစ်အဖြစ်ကျယ်ပြန့် applications များရှိပြီးအများစုမှာယေဘုယျစက်မှုဇုန်စက်ရုံများအဖြစ်စီးပွားဖြစ်အဆောက်အဦးများအတွက်အသုံးပြုသည်။ ကနှိုင်းယှဉ်အစိုင်အခဲအခင်းကဲ့သို့တူညီသောဝန်ကိုထောက်ပံ့ကတည်းကဒါဟာအစထပ်ခိုးကုန်းပတ်အဖြစ်အသုံးပြုရန်စံပြဖြစ်ပါတယ်။ ထက်ကိုပိုပြီး၎င်း၏ကုန်ကျစရိတ်ချွေတာပွင့်လင်းလေ, အလင်း, အပူ, ရေနှင့်အသံသည်များ၏စောင်ရေကောင်းလာတာပါ ပစ္စည်း: ကာဗွန်သံမဏိ Surface ကကုသမှု: mount, သွပ်ရည်စိမ်နှစ်ပြီးသော-ပူအလင်းတာဝန်နှင့်မိုးသည်းထန်စွာတာဝန်အတွက်သာရရှိနိုင်, welded, စာနယ်ဇင်း-သော့ခတ်, swaged သော့ခတ်သို့မဟုတ် flush အတွက်သာရရှိနိုင်ဆောက်လုပ်ရေးသံမဏိခြစ် Features: * စတော့ရှယ်ယာအရွယ်အစားသို့မဟုတ်စီမံကိန်းသတ်မှတ်ချက်များနှင့်တွေ့ဆုံရန်လုပ်ကြံထုံးစံများတွင်ဝယ်ယူနိုင်ကြပါတယ်။ စွမ်းရည်ဆောင်သော * Excellent ကဝန် * လေထု၏လေဝင်လေထွက်အလင်း, အသံ * အရည်များနှင့်အပျက်အစီးများ * Long ကဝန်ဆောင်မှုဘဝစုဆောင်းမနေပါနဲ့ * ပွင့်လင်းဒေသများ၏ Wide အကွာအဝေး * အားပေးမှုဖြစ်စေခဲ့ပြီးသံမဏိဆန်ခါတစ်ခုပွိုမျက်နှာပြင်ရှိပါတယ်။ ဒါဟာအစချော serrated နှင့်လွင်ပြင်ဆန်ခါတစ်ခုအမြဲတမ်းအစားထိုးဖြစ်ပါတယ်။ * ဒါကြောင့်လိုအပ်ချက်များနှင့် applications များအမျိုးမျိုးတွေ့ဆုံရန်ကွဲပြားခြားနားသောစတိုင်များနှင့်အကွာရွေးချယ်စရာအများအပြားရရှိနိုင်ပါတယ်။ * Anti-ခိုးယူဒီဇိုင်း: မျက်နှာဖုံးနှင့်ဘောင်ပတ္တာပူဇျောသက်ကာလုံခြုံရေး, ဘေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေးနှင့်ပွင့်လင်းအဆင်ပြေစေရန်နှင့်အတူပူးတွဲဖြစ်ပါတယ်။ * အမြင့်တန်ခိုးအစွမ်းသတ္တိ: ခွန်အားနှင့်ခက်ခဲတဲ့သွန်းသံထက်ပိုများသည်။ ဒါဟာဆိပ်ကမ်း, လေဆိပ်, အခြားကြီးမားသော-span နှင့်မိုးသည်းထန်စွာတင်ခွအေနအေအတှကျအသုံးပွုနိုငျသညျ။
သတ္တုဘားခြစ်စက်မှုအခင်းစျေးကွက်၏လိုမျိုးတော့ဖြစ်ပါတယ် decades.Strong များအတွက်စက်မှုလုပ်ငန်းတာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်နှင့်တစ်ခုခြွင်းချက်အစှမျးသတ်တိ-to-အလေးချိန်အချိုး, သတ္တုဘားဆန်ခါနှင့်အတူအကြမ်းခံကိုအလွယ်တကူဖွင့်လှစ်ဧရိယာကြောင့်နီးပါးဆို configuration.The မြင့်မားတဲ့ရာခိုင်နှုန်းမှလုပ်ကြံနိုင်ပါသည် လက်တွေ့ကျကျပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှု-အခမဲ့နှင့်ထုတ်ကုန်အားလုံးကိုဆန်ခါဘားအပြည့်အဝပြန်လည်အသုံးပြုနိုင်သည့်ပစ္စည်းဖြစ်ကြသည်။ဆန်ခါဘားအများအပြား application များအတွက်ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသည်။ ဆန်ခါဘားတုတ်ကျင်းများနှင့်လှေကားထစ်နင်းရာမှကုန်းပတ်နှင့်သံမဏိအခင်းအထိစီမံကိန်းများအတွက်အားကြီးသောရှေးခယျြမှုဖြစ်ပါတယ်။ သတ္တုခြစ်, အခင်းအဆင့်ဆင့်အကြားသွားအလင်း, အရည်, လေ, အပူနှင့်အသံသည်လိုအပ်သည်ကြောင်းအခင်းထဲမှာဘားဆန်ခါအဖုံးများဖွင့်လှစ်ဒေသများအဖြစ်အသုံးပြုခဲ့သည်။ ဤအတောအတွင်းအများအပြားစက်မှုကုမ္ပဏီများသည်, ဤအကြောင်းပြချက်နှင့်ပိုပြီးအဘို့အဆန်ခါကြမ်းပြင်အဖြစ်အသုံးပြုရန်အတွက်ဆန်ခါကျွန်တော်တို့ရဲ့ bar ကိုတင်ထားရမည်။ ဥပမာအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ serrated ကာဗွန်သံမဏိ bar ကိုဆန်ခါလမ်းလျှောက်သည့်အခါအပိုချုပ်ကိုင်ထားပေးပါသည်, ငါတို့ Titeweld? ဘီးတပ်ကုလားထိုင်, လက်ထရပ်ကား, လှည်းသို့မဟုတ်မော်တော်ယာဉ်အသုံးပြုမှုအတွက်အခါ bar ကိုဆန်ခါအများဆုံး “လိပ်-a-bility” ထိုသို့ဖြစ်နိုင်သမျှစေသည်။ တိုက်ရိုက် Metals, ကျွန်တော်တို့ရဲ့လူမီနီယံဆန်ခါနှင့်ငါတို့ bar ကိုဆန်ခါထုတ်ကုန်ပစ္စည်းလိုင်းတက်အောင်ဆန်ခါသံမဏိအမျိုးမျိုးမှာ။ ခြားနားချက်လူမီနီယံနှင့်သံမဏိဆန်ခါကဘာလဲ? အောက်တွင်ဖော်ပြထားသောသတင်းအချက်အလက်ဆန်ခါသတ္တုမှာကြည့်လိုက်ပါ!
Anchoring ဖုန်းများအတွက်ဆန်ခါဘားပူးတွဲ ယင်း၏အထောက်အကူပေးရန်။ ကျနော်တို့ကုန်းနှီးကလစ်များ, ကျောက်ဆူးလုပ်ကွက်, ပျဉ်ကလစ်များ, countersunk မြေများ, ဆန်ခါညှပ်, Z ကိုကလစ်များနှင့်ပျဉ် lugs ကိုဆက်ကပ်။ အတော်များများကလူမီနီယမ်, သံမဏိနှင့်သွပ်ရည်စိမ်သံမဏိအတွင်းရရှိနိုင်ပါသည်။ထုတ်လုပ်မှု type ကိုဆန်ခါသံမဏိဘား ASTM ပျော့ကာဗွန်သံမဏိထံမှထုတ်လုပ်သောသုံးယောက်ကွဲပြားထုတ်ကုန်အတွက်ရရှိနိုင်ပါသည်: type ကို “W” ဆန်ခါဘား welded, type ကို “၎င်းကို” dovetail ဖိအားဆန်ခါသော့ခတ်, နှင့် “SL” swage ရိုက်ထည့်ဆန်ခါသော့ခတ်။ အားလုံးသုံးထုတ်ကုန် bearing ဘားစင်တာအပေါ်ဖြစ်စေမှာစင်တာနှင့်လက်ဝါးကပ်တိုင်အရက်ဆိုင်ပေါ်အထိနေရာခြားနှင့်အတူရရှိနိုင်ပါသည်။ တစ်ခုချင်းစီကိုထုတ်ကုန်စံလွင်ပြင်မျက်နှာပြင်ရှိပြီးသို့မဟုတ် optional ကို serrated သို့မဟုတ် Algrip မျက်နှာပြင်များနှင့်အတူသတ်မှတ်ထားသောနိုင်ပါသည်။ Finish ကိုရှေးခယျြစရာရှင်းလင်းသောသံမဏိ, အားပေးမှုဖြစ်စေခဲ့ပြီးခြယ်ပူသို့ကျဆင်းလာခြင်းသို့မဟုတ်အထူးအင်္ကျီများပါဝင်သည်။ ဝန်စားပွဲဆန်ခါသံမဏိဘားထိုထုတ်ကုန်နှင့်ဆက်စပ်သောအသေးစိတ်သတ်မှတ်ချက်သတင်းအချက်အလက်များသည်။
ပရီမီယံ Manhole ခြစ်အထူးကု | เกรตติ้งตะแกรงเหล็กไฟเบอร์กล๊าสพลาสติกระบายน้ำล้นรอบขอบสระว่ายน้ำสำเร็จรูป FRP-ဖန်မျှင်ထည်သံမဏိပလတ်စတစ်ဆန်ခါ | ฝาปิดบ่อพักเหล็กหล่อครอบท่อระบายน้ำทิ้งแผ่นปูพื้นทางเดินยกระดับကျဇယား-သို့ကာစ်-သံ MANHOLE မျက်နှာဖုံး | လျှံ သို့ဖြစ်. ရေဆင်းစနစ်ကိုပြုပြင်ခြင်း Gully မြောင်းခြစ်ရေကူး | | ตัวอุปกรณ์คลิปล็อคยึดแผ่นตะแกรง Anchor ဖုန်းများအတွက် Clip Clamp Lock ကိုစွဲစေ Fastener ဘားသံမဏိခြစ်ပီပြင်ကုန်းနှီးပူးတွဲ | ตะแกรงดักขยะใบไม้ในคันหินด้านข้างริมฟุตบาท သို့ဖြစ်. ရေဆင်းစနစ်ကိုပြုပြင်ခြင်းခြစ် Scupper Curbed ကြက်ဥသေတ္တာแผงระแนงบังตาหน้ากากตึกตะแกรงกั้นช่องแสงบังไฟตกแต่งตู้ปลา | แผ่นปิดจมูกขอบมุมคิ้วแผงครอบบันไดแผ่นปูพื้นปิดผิวกันลื่นไฟเบอร์กล๊าส FRP လှေခါးထစ်ကိုနင်းနှာခေါင်းအဆင့်ဖုံးကာကွယ်ပေးသူ: FRP ဆန့်ကျင်စလစ်ဖြတ်ပိုင်းပုံစံ Gritted ပြား sheet | သိုလှောင် Tools များ